Royal Big Cat: ဇတ်ကားများ
Showing posts with label ဇတ်ကားများ. Show all posts
ဒီဇတ်လမ်း ထွက်နေတာတော့ ကြာပါပြီ... ကြောင်ကြီးစီမှာ မတင်ရသေးလို့ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... ကြည့်ပြီးလဲ ထပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်... တော်တော်လေး ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ ဇတ်လမ်းလေးပါ...
mail ထဲရောက်လာတာပါ ။ မြန်မာတော့ ဟုတ်လောက်ပါတယ်.
မြန်မာ သ င်္ကေတ ပါပြီး တကိုယ်လုံးပုံ,ကိုယ်တပိုင်းပုံတွေ ဆို
လီးရှည်ပို့ပေးတဲ့ fb ပေါ်က အတိုအထွာတွေပါ...
ရှေ့နေ မမ ( မြန်မာ home made စစ်စစ်)
အခုတစ်လောနာမည်ကြီးနေတဲ့ ရှေ့နေ မ ဆိုတာဒါပါပဲ ။
ဒီထက်မြန်မာစစ်တာ တော့ မရှိတော့ဘူး ။
mail ထဲရောက်လာတာပါ ။
မြန်မာ သ င်္ကေတနဲ့ ထူးထူးခြားခြားဦးဦးဖျားဖျားလေးတွေလဲ
ပို့ပေးကြပါဦး ဘော်ဒါတို့ ။ စောင့်မျှော်လျက်ပါ ။
download link တွေတော့ ဆရာ ဇီဝက တင်ပေးနေပါတယ် ။
အပန်းမကြီးဘူးဆိုရင် ဘော်ဒါတို့ ကြောင်ကြီးဆိုက်ကို
ဘာ device အမျိုးအစားတွေသုံးပြီးကြည့်နေတယ်ဆိုတာ
ရေးပေးခဲ့ပါလား, သိရ အောင် လို့ပါ ။
မြန်မာမှန်းသနပ်ခါး လူးထားတာ ကြည့်ရုံနဲ့ သိသာနိုင်ပါတယ်...
ဒီ video file ကကြည့်ဖူးတာကြာပါပြီ ။အသံမပါတော့ပါဘူး ။
စော်တွေကတော့ကျောင်းသူတွေလား ktv ကဇယားတွေလားမသိပါ ။
သိသူများရှိရင် မျှဝေပါဦး ။
ကားဟောင်းလေးပါ စုဆောင်းထားတာလေးတွေ ပျောက်ကုန်မှာစိုးလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ
. Blogger ကြောင်ကြီး
မြန်မာစစ်စစ်ပါ ။ ဟုမ်းမိတ်လား ဟော်တယ်မိတ်လားတော့
မပြောတတ်ဘူး။ mail ထဲရောက်လာတာပါ ။
(ကြောင်ကြီးတပည့်ကျော် - ပြေတီဦး)
doggy မြန်မာပါ ။
ဟိုတလောကတင်ပေးတဲ့ ပုံတွေရဲ့ နောက်ကျ ဇတ်ကားလေး ဖြစ်ဖို့များတယ်
ကြောင်ကြီးလဲ မအားတာနဲ့ ခုတလော အသစ် တွေ မတင်ဖြစ်တာပါ....
ဆံပင်ရှည်ရှည် အိုးကောင်းကောင်း နဲ့ မာဆက်က ကောင်မလေး